I-Peacock Tiny House eduze ne-Las Vegas - I-Airbnb
I-Peacock Tiny House eduze ne-Las Vegas
642 okushiwo abanye
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-Rob
Sinekhaya elincane eliyingqayizivele elise-Sandy Valley NV. Ihora elilodwa ngaphandle kweningizimu ye-Las Vegas ngaphandle kwe-US 15. Leli elinye lamakhaya amancane amabili epulazini le-dude elinokugibela kwamahhashi, ukushayela kanye nemicimbi ye-rodeo ( Uma itholakala ) Sesha i-Sandy Valley Ranch. Woza uzohlala endaweni yethu enhle esogwadule. Jabulela ukuthula kwe-Mojave Desert futhi ubheke ulwandle lwezinkanyezi. Siseduze ne-Beat Valley, i-Tecopa hotsprings kanye nekhaya le-GoodSprings le-Pioneer Saloon edumile.
Indlu yethu encane/i-Peacock inendlu yangasese efuthwayo, ishawa enamanzi ashisayo, isitofu, isiqandisi nombhede omkhulu ontofontofo. Usofa uphinde ukhiphe ukuze ube umbhede, mkhulu kakhudlwana bese kuba yinto emibili kodwa emincane bese uyindlovukazi. Ungajabulela ukubukela ukushona kwelanga nokuhlala ngaphansi kolwandle lwezinkanyezi kusuka kuvulande wethu ophezu kophahla.
Sivumela izilwane ezifuywayo kodwa sikhokhise imali engu- $ 10 yezilwane ezifuywayo. ubusuku ngabunye. Sicela ukuthi ungashiyi isilwane sakho esifuyiwe uma uhamba ngaphandle kwendlu. Sinikela ngokuziqhenya ingxenye yezimali zethu zezilwane ezifuywayo ku-SPCA.
4.92 out of 5 stars from 642 reviews
4.92 · 642 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-642
Kunama-saloon ambalwa endaweni anesimilo nokudla okumnandi. Inombolo yethu oyikhethayo yi-Pioneer Saloon etholakala e-Goodsprings amaminithi angu-15 nje ukusuka epulazini.
Ungaxhumana nathi noma nini uma udinga noma yiluphi usizo.
no-Sandi Inombolo yethu yocingo isemyalezweni wesethulo esiwuthumelayo.